Soomaliya oo ka qeybgashay shirka Amniga Bariga Afrika ee Yugandha | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Soomaliya oo ka qeybgashay shirka Amniga Bariga Afrika ee Yugandha
Soomaliya oo ka qeybgashay shirka Amniga Bariga Afrika ee Yugandha
Muqdisho(SONNA) Magaalada Kampala ee xarunta Dalka Yugandha ayaa waxaa ka soconaya shir ku saabsan Amaanka wadamada kuyaala Bariga Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto,kaasi oo ay ka qeybgalayaan Madaxda arrimaha Ammniga ee Bariga Afrika .
Wadamada ka qeybgalaya shirkan oo gaaraya ilaa 14 wadan waxaa ku jira Soomaaliya oo kamid ah wadamada sida gaarka ah diiradda loogu saari doono shirkaasi gaar ahaan tayaynta Ciidamada Soomaaliya.
Ajandayaasha ugu badan ee shirkaasi horyaala ayaa ah amniga oo dhinacyo kaladuwan looga hadlayo sida iskaashiga sugidda amniga iyo ka hortagga khataraha ay bulshada kala kulmaan kooxaha Argagixisada ee Alshabaab.
Korneel Muuse C/qaadir Xasan oo katirsan hogaanka xiriirka dibedda ee booliska dowladda Soomaaliya, kana mid ah saraakiisha ka qeyb galeysa shirkan ayaa sheegey in muhiimad gaar ah uu u leeyahay Soomaaliya.
“Shirkan waxaa ka qeybgalaya 14 dalka oo Bariga Afrika kuyaala,ka Soomaali ahaan, aad ayuu muhiimad uu inoogu leeyhaay waxaana loooga hadlaya arrimo ay kamid yihiin sidii loo tayeyn lahaa ciidamada Qaranka Soomaaliya, loona qalabayn lahaa si ay Ammaankooda u la wareegaan,waxaana geba gebada imaan doona Wasiirada amniga ama arrimaha gudaha ee wadamadan shirka ka qeybgalaya”, Ayuu yiri Korneel Muuse.
Wadamada Yugandha iyo Kenya oo shirkaasi ka qeybgalaya ayaa kamid ah wadamada ciidamada ka jooga Soomaaliya,kuwaasi oo Soomaaliya ka taageeraya dagaalka ka dhanka ah Shabaab.
Previous articleGoobo ganacsi oo ay lahaayeen dad Soomaaliyeed oo boob loogu geystay K/Afrika
Next articleMuran ka taagan heshiiska hub kala iibsiga ee Ruushka iyo Turkiga